Moustapha Radjan : Nisy nitifitra tetsy Analamahitsy -
AccueilRaharaham-pirenenaMoustapha Radjan : Nisy nitifitra tetsy Analamahitsy
Teratany karana iray antsoina hoe Moustapha Ameralli Alibay Radjan no nisy nitifitra tetsy Analamahitsy omaly maraina. Telolahy araka ny vaovao azo no nanatanteraka izao fitifirana izao ka roa nandeha moto cross, ny fahatelo kosa nandeha an-tongotra.
Tsy zoviana eo amin’ny tontolon’ny raharaham-pitsarana i Moustapha Radjan. Nigadra teny Tsiafahy ny tenany ny volana Jolay 2012 rehefa voasambotra teny Ambodivoanjo noho ny resaka baomba artizanaly. Voatery notifirina mihitsy moa tamin’izany fotoana ny kodiaran’ny fiara Volkswagen Tiguan nitondra azy. Nambaran’ny zandarimaria nandritra ny valan-dresaka tamin’izany fa nahatratrarana baomba artizanaly am-polony tao an-tranon’i Moustapha etsy Tsaralalana. Voarohirohy tamina famotsiam-bola indray koa ny volana May 2013 ary voatonona tamin’ny famonoana ny jeneraly Claude Ramananarivo sy ny vady aman-janany. Ny tontolon’ny trafika-na volamena no tena nahalalana an’i Moustapha, nandrenesana ny anarany koa anefa ny sehatry ny kidnapping ary voarohirohy tamina trafika-na basim-borona miisa 99 niampy bala miisa 93.000 koa ny olona akaiky azy. Nahazo fahafahana vonjy maika i Moustapha ny faha-27 May 2013, nifanandrify tamin’izay fotoana izay indrindra anefa no nipoitra ny raharaha famotsiam-bola nanenjehan’ny Fitsarana azy.
Tokony hanampy ny mpanao famotorana sy ny mpitandro filaminana amin’ny fandravana ny tambazotra mpanao kidnapping sy fanafihana mitam-piadiana iny fitifirana an’i Moustapha iny. Misy fifandrifian-javatra goavana be mantsy teo amin’iny fitifirana iny sy ny zava-nitranga nandritra ilay kidnapping tsy nahomby tamin’ny zoma ary ny fakàna an-keriny ny zanaky Chandarana tetsy Behoririka ny faha-7 Jona 2017 ary ny fitifirana ny masoivohon’i Malezia, Zahid Houssenaly Raza tetsy Tsaralalàna ny faha-24 Aogositra 2017.
Samy nitaingina moto cross avokoa ireo olon-dratsy ary manodidina ny telo hatrany koa ny isan’izy ireo. Nitovy ihany koa ny fomba fiasan’izy ireo indrindra fa tamin’ity fitifirana an’i Moustapha ity sy Zahid Raza. Azo eritreretina araka izany fa andian-jiolahy iray ihany no tompon’antoka tamin’ireo tranga voatanisa ireo ary tsy azo isalasalana fa olona tena mahay mampiasa basy ary nahazo fiofanana manokana amin’izany.
Niantefan’ny tsikera sy ny fanankinana hatrany ny fitondram-panjakana amin’ity resaka kidnapping ity ary mazàna ireo fianakaviana lasibatra mihitsy no maneho fihetsika manilika ny manampahefana eto an-toerana. Porofon’izany ny tsy fisian’ny fiaraha-miasa ka aleon’izy ireo miantso mpitandro filaminana vahiny. Ho tsorina anefa ny resaka fa mandoto firenena ity adilahy mihafara amin’ny vonoan’olona eo amin’ny samy karana ity. Mandoto firenena ny fifanolanana sy ny “règlement de comptes” eo amin’ny samy karana ka tokony handray fepetra ireo fianakaviambe. Manaratsy endrika an’i Madagasikara mihitsy io fifandonan’ny samy karana io ka tsy azo ekena intsony.